Wiil uu dhalay Xasan Yoonis Habb
Wiil uu dhalay Xasan Yoonis Habbane oo maalintii saddexaad Hargeysa ugu xidhan eedeyn la xidhiidha inuu Xirsi dilayo
“C.I.D-du iyaga oo saddex Gaadhi wata ayey guriga iga soo qaadeen oo waxay igu yidhaahdeen 5000 oo Doollar oo Zaadka Mobile-kaaga..
Hargeysa (TNN)- Maxamed Xasan Yoonis Habane oo ka tirsan Ciidanka Qaranka, ayaa saddex m aalmood ku xidhan Saldhigga dhexe ee Booliska magaalada Hargeysa, ka dib markii lagu eedeey ey inuu ku wado hawl gal uu ku dilayo Chief Of Cabinet-ka Madaxtooyada Somaliland Xirsi Cali Xa aji Xasan.
Weriye Berberanews ka tirsani Saldhigga ku booqday, ayuu Maxamed Xasan Yoonis Habbane, u ga warramay sida wax u dhaceen iyo kiiska lagu soo eedeeyey ee uu ugu xidhan yahay Saldhig ga dhexe ee Hargeysa. “Laba cisho ka hor intaan lay xidhin laba jeerbaa CID-da la iiga yeedhay, markii aan C.I.D-da tegayna, ‘Gaadhigaaga ayaad hub saartaa baa la igu yidhi,’ aniguna soo cad deeyaan idhi. Ka dibna waxa dhacday in saddex cisho ka hor la igu casuumay Shir uu qaban-qa abiyay Taliyaha Ciidanka Qaranka Nuux oo lagaga hadlayey nabadgelyada oo ka dhacay Ambas ador, Millateri ahaanna waa laygu Macsuumay.” Ayuu yidhi Maxamed Xasan Yoonis.
Waxaanu Maxamed oo hadalkiisa sii wataa intaa ku daray oo uu yidhi; “Nuux Taani baana noo yeedhay, intii aannan tegin oo saacadi ka hadhsan tahay ayaa C.I.D-da la igala soo hadlay, oo la yidhi,’ ‘Xirsi baad dilaysaa, oo waxbaad dilaysaa baa, anna waxaan ku yidhi kaalayoo igu soo caddaysta, gurigay iigu yimaaddeen iyagoo saddex gaadhi oo Ciidana wata, waxay igu yidhaah deen 5000 oo Doollar oo Zaad kuugu soo dhacday ayaa moobilkaaga ku soo dhacday, markaan idhi maxay ahaydna, waxa la igu yidhi (hawl-gal) Operation Xirsi aad ku dilayso ayaad ku fulin aysaa, dabadeedna waxaan idhi hala igu soo caddeeyo, Moobilkii baa la iga qaaday oo TELESOM la geeyey, waana laga waayey lacagtii. Ka dibna Xaruta C.I.D-da ayaa; la i geeyey, sidiibaanan ku xidhanahay.”
“Arrintayda Taliyaha Booliska Cilmi-Kabaal baa galay iyo Saraakiil kale, Aniguna waan diiday in aan ka baxo Saldhigga illaa dembiga aan galay la igu caddeeyana ma baxayo ayaan idhi.” Ayuu yidhi Maxamed Xasan Yoonis. Waxaanu sheegay inay taleefan ka wadahadleen Taliyaha Ciida nka Qaranka Nuux Ismaaciil Taani, isaga oo arrintaa ka hadlaayana waxa uu yidhi; “Nuux baa I soo garaacay oo yidhi waan ogahay inaad CID joogto oo laygu xidhay, shirkiina waan ka soo baxay oo Xirsi baannu isku dhacnay, iska adkayso, sidiibaan ku xidhanahay.”
Dhinaca kale, Masuuliyiinta ay arrintani khusayso oo ay shabakaddu isku dayday inay warkan wax ka weydiiso ayaanay noo suuragalin, ka dib markii aannu khadka Taleefanka kula xidhiidh nay Taliyaha guud ee Booliska Somaliland Cilmi Rooble Furre (Cilmi-Kabaal) ayaa taleefanka na ga qaban waayey. Sidoo kale, Chief Of Cabinet-ka Madaxtooyada Xirsi Cali Xaaji Xasan, ayaa nay isagana noo suuragalin inaannu ku hello khadka taleefanka gacanta. Published: 2011-06-07
Source: Berbera News